Fulgurite: kedu ihe ọ bụ, njirimara, mmalite na njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime obi abụọ bụ ma zuru ezu ọ bụ ịnweta ma ọ bụ nkume. Anyị na-ekwu maka mineraloid nke mmetụta nke àmụ̀mà na usoro ya bụ ihe akaebe nke ọdịdị nke ihe ikuku a. Fulgurite maara nke ọma ma bụrụ nke ọtụtụ mineraloids a maara dị ka lechatelierite.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mbido ya na ngwa ya nke fulgurite.
2 Njirimara nke fulgurite
3 Nzube nke fulgurite
4 Oche mmiri na ojiji
Anyị kwuru na ọ bụ A bụ mineraloid nke mepụtara site na ọkụ ọkụ. Eziokwu ahụ bụ na a na-akpụ ụdị ịnweta site na ọkụ ọgbụgba ọkụ dị oke egwu iji nyochaa ọzọ. Agbanyeghị, ka anyị nyochara, anyị na-achọpụta etu ịtụnanya a bụ myraloid siri dị ịtụnanya. Aha fulgurite sitere n'okwu fulgur nke n'asụsụ Latịn pụtara ọkụ. Ha nwere ike ịbụ nke ezigbo mineraloid mara aha lechatelierite. Ha bụ owuwu amorphous nwere ọdịnaya dị elu nke silicon oxide. Maka ịtụle mineraloid n'ime otu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị silica mepụtara ha.
E nwere ụdị fulgurite ọzọ nke ihe ndị ọzọ mejupụtara. Ejirila ala ụrọ kpụọ ụfọdụ n'ime ha na ụdị okwute ndị ọzọ so n'òtù metamorphic.
Njirimara nke fulgurite
Ihe a na-ejikarị myraloid bụ ájá siliceous. Ngwakọta kemịkal nwere ike ịdị iche na-adabere na gburugburu ala ebe etolitere ya. Ọ dịkwa n’ógbè ụwa ebe àmụ̀mà gbagburu. Ọtụtụ ndị fulgurites nwere ike nwere obere aluminom oxide, titanium, wdg. Ha agha mejuputara otutu silica oxide. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ihe kpatara ụfọdụ fulgurites ji enwe ndo n'etiti aja aja na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ mgbada ele nke dị na iron oxide.
E nwere ọtụtụ agba na ị nwere ike ịnweta myraloid a site na ọcha, site na acha oji na nke ojii. Ihe owuwu nke fulgurite nwere ike buru ihe ojoo. Ọ bụrụ na anyị nyochaa ọdịdị nke fulgurite, anyị ga-ahụ na ọ siri ike ma nwee ọdịdị yiri mgbọrọgwụ osisi. Imirikiti mgbọrọgwụ bụ nke cylindrical.
Nzube nke fulgurite
Dịka anyị kwurula na mbụ, mmalite nke mineraloid a sitere na ọkụ ọgbụgba. Site na ike eletriki ndị a dị ike nke ikuku, enwere ike ịmepụta ụdị mineraloid a. Nke mere na fulguritas Ọ na-ewe ma ọ dịkarịa ala ogo 1600-2000 iji mepụta. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme atụmatụ na ike nke àmụmà dịgasị iche n’agbata 1-30 megajoules kwa otu mita.
N'oge àmụmà, anyị matara na ọ na-aga n'ala. Ọ bụ n'oge ahụ ka ọ na-agbaze ma mee ka ngwakọta nke ihe ala. Enwere ngwakọta nke juputara na aja ma ọ bụ ụrọ nke nwere ike ịgbaze n'ihi ọkụ ọgbụgba. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta ihe owuwu ndị dị n'ụdị tubes na Ha nwere ike tụọ site na di na nwunye abụọ centimeters ruo 15 mita n'ogologo.
N'ọtụtụ ụdị ihe akaebe nke oghere dị warara nke iko a wụrụ awụ nwere ike ịhapụ na mgbidi dị n'ime. Na mpụga, anyị nwere ike ịlele naanị udiri ederede nke granules na obere okwute mebere. Ọdịdị dị ịtụnanya dị n'ime ụlọ na-eme mgbe anyị nyochachara fulgurite site na microscope elektrọn.
Dabere na ihe mejupụtara na morphology, enwere ike ịkọwapụta fulgurite n'ọtụtụ ụdị:
Sand fulgurite: Ọ bụ nke ahụ na - eme mgbe ọkụ ọgbụgba dara n’elu ala nwere agwa aja.
Clay Fulgurite: ọ na - abụkarị mgbe ọkụ ọgbụgba na - eme na ala nwere ọtụtụ ụrọ ma mepụta ụdị ihe ọzọ na mineraloid a.
Calcium sedimenti: Ọ bụ ụdị dịgasị iche iche nke nwere nnukwu calcium n'ụdị nke ihe eji eme ka mmiri gwụ.
Nkume fulgurite: ọ na-adịkarị na nkume ndị ọzọ na otu n'ime akụkụ abụọ ahụ. Ha na-abụkarị ndị buru ibu ma buru ibu ma nwee nnukwu ike.
Nnukwu fulgurites: ha nwere ike ibu uzo ma obu odidi.
Oche mmiri na ojiji
Ná mmalite nke isiokwu anyị kwuru na a pụrụ ịchọta mineraloid a n'ụwa niile. Anyị maara na ọtụtụ puku àmụmà na-ada n’elu ụwa kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na kpọmkwem n’obodo anyị bi na ya, ọ dịghị àmụ̀mà ọ bụla na-ada, ha na-adabakarị n’ebe ndị a na-ejighị ihe ndị e kere eke na-ebikọghị ọnụ. Ka àmụmà wee ghara iru n’elu, ọ ga-enwerịrị ọnọdụ ndị kwesịrị ekwesị maka ya.
Ebe kachasị amasị iji chọọ nkwụnye ego nke mineraloid a bụ ọzara, ụsọ oké osimiri na ọbụna n'ugwu. Na kọntinent America na-enwu ọkụ karịa, ya mere enwere ụfọdụ ego pụtara ìhè nke fulgurite. A hụrụ ha n’ime Osimiri Maldonado, ọzara Atacama, ọzara Sonora na steeti Utah, Arizona na Michigan. Otu n'ime isi mmalite ama ama zuru oke n'ụwa niile bụ Sahara Sahara, nke dị na kọntinent Africa.
Dị ka a ga-atụ anya ya, ụmụ mmadụ na-eji usoro ndị a eme ihe. Ngwa dị mkpa na mpaghara sayensị niile. Na, ekele maka ọzụzụ a, ọ ga-ekwe omume ịmegharị omume nke ihu igwe n'oge gara aga na mpaghara ụfọdụ. Site na iji mineraloid a, ọ ga-ekwe omume ịmara ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị na mpaghara ụfọdụ ọtụtụ puku afọ gara aga. Akụkụ a ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịghọta mgbanwe ihu igwe.
N'ezie, a ga-atụ anya na ụmụ mmadụ jisiri ike nweta Fulgurite site n'aka aka. Ntị ya nwere ike ịdị ize ndụ, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa iji arc eletrik nwere oke voltages. Ọ bụrụ na emeghị ya nke ọma ọ nwere ike ịdị oke egwu. Anyị na-ekwu maka ịrụ ọrụ na àmụmà. Nke a bụ ihe mere fulgurite ji enwe ọnụ ahịa dị elu karịa nke nkịtị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere fulgurite na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Fulgurite
Oke Osimiri Arebia